((အဟ်ယာအိုလ်မိုင်ယသ် ဗေဖဆွာအေလေ အဲဟ်လိုလ် ဘိုက်သ် (အ.စ))) ကျမ်း လာ ဟဒီးစ်တော် ၁၊၂၊၃ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
((အဟ်ယာအိုလ်မိုင်ယသ် ဗေဖဆွာအေလေ အဲဟ်လိုလ် ဘိုက်သ် (အ.စ))) ကျမ်း လာ ဟဒီးစ်တော် ၁၊၂၊၃
ဒီဇငျဘာ ၃, ၂၀၁၅ - ၁၁:၅၉ ညနေ
News Code : 722926
((အဟ်ယာအိုလ်မိုင်ယသ် ဗေဖဆွာအေလေ အဲဟ်လိုလ် ဘိုက်သ် (အ.စ))) ကျမ်း လာ ဟဒီးစ်တော် ၁၊၂၊၃ ကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
ဤဟဒီးစ်တော်များဟာခြောက်ဆယ် (၆၀ ) အရည်အတွက်ရှိသည့်ဟဒီးစ်တော်များဖြစ်ပါသည်။ဤဟဒီးစ်တော်များအားလုံး (၆၀) ကိုစုပေါင်း၍
အကျွန်ုပ်(အလာမာရှိက်္ခဂျလာလွတ်ဒီး(န) စူယူးသီး (စွန္နီသာသနာ့သုခမိန်ပညာရှင် ) အနေဖြင့်
احیاء المیت بفضائل اهل البیت علیهم السلام
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) ၏ဆွေမျိုးညာတိအနွယ်တော်မွန်များနှင့်အချစ်မေတ္တာထားခြင်းသာ လျှင်မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏ကျေးဇူးတော်များကိုဆပ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
اخرج سعید بن منصور فی سننه ،عن سعید بنجبیر ، فی قوله تعالی ( قل لا أسألکم علیه أجرا إلاّ المودة فی القربی ) قال قربی رسول الله علیه وسلم .
စအီးဒ်ဗင်မန်းဆူ(ရ)သည်မိမိ၏ကျမ်း (စနန်း(န) ၌စအီးဗင်ဂျာဘီး(ရ) ထံမှတဆင့်ရေးသားထားတော်မူသည်မှာအာယသ်သေမိုဝါသတ်(သ) တော် (၄၂း၂၃)
قل لاأسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی
အဓိပ္ပာယ် - (အိုမဟာတမန်တော်မြတ် (ဆွ) အသင်ပြောကြားပါလေ။အကျွန်ုပ်သည်ဤ (သဗ်လီးေ့ရေဇာလသ်) (ခ) သာသနာပြုခ၊အခကြေးငွေနှင့်အသင်တို့အပေါ်ဝယ်ပြုထားသောကျေးဇူးတရားတော်များအတွက်အကျွန်ုပ်၏အနွယ်တော်မွန်အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) နှင့်အချစ်မေတ္တာထားခြင်းမှအပ၊ဘယမှမလိုအပ်ပေ။ ) ၏သဖ်စီး (အကျယ်ဖွင့်ကျမ်း ) တွင်တင်ပြရေးသားသီးကုံးထားပါသည်။အလ်ကုရ်ဗာဆိုသည်မှာမဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ဆွေမျိုးညာတိတော်အနွယ်တော်မွန်များဖြစ်ချေသည်။
မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်(ဆွ) ဆွေမျိုးညာတိအနွယ်တော်မွန်များသည်အဘယ်သူများဖြစ်ကြကုန်သနည်း ?
اخرج ابن المنذر، ابن ابی حاتم و ابن مردویه فی تفاسیر هم . والطبرانی فی المعجم الکبیر عن ابن عباس ، لما نزلت هذه الآیة ( قل لا أسألکم علیه أجرا إلاّ المودة فی القربی ) ، قالوا : یا رسول الله من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم ؟ قال (( علی و فاطمة وولداهما )) .
အေဗ်နေမွန်ဇရ် နှင့်အေဗ်နေဟာသင်းမ်ထိုနောက်အေဗ်နေမာရ်သဝိုင်းဟ်တို့အနေဖြင့်မိမိတို့၏သဖ်စီး (အကျယ် ဖွင့်ကျမ်း) များတွင်တင်ပြရေးသားသီးကုံးထားပါသည်။ထိုအတူသက်ဗ်ရာနီးအနေဖြင့်မိမိ၏ကျမ်း (အလ်မိုအ်ဂျမွလ်ကဗီးဂ် ) တွင် ဂျနာဗေ အေဗ်နေအဘာစ် (ရ.သွေ့) သခင်ထံမှ တဆင့် ရေးသားသီးကုံးထား ပါသည်။
ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အာယာသ်တော် …
ကျမြန်း လာသည့် အခါ လူထု အနေဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး မိုဟမ္မဒ် (ဆွ)ထံမေးမြန်းလျှောက် ထားကြပေသည်။ အိုတမန် တော် မြတ် အလ္လာဟ်၏ရစူလ်(ဆွ)သခင်ကြီး၏ထိုဆွေမျိုး ညာတိ အနွယ်တော်မွန်များသည်အဘယ်သူများဖြစ်ကြပါသနည်း? ကျွန်တော်မျိုးတို့ အပေါ်၌၎င်းတို့အားချစ်မြတ်နိုးမေတ္တာထား ရန်မ ပြုမနေရတာဝန်ပေးထားပါသည်။
ထိုအချိန်၌တမန်တော်မြတ်(ဆွ) အနေဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူသည်။ ထိုဆွေမျိုးညာတိ အနွယ်တော်မွန်များသည်အလီ(အ.စ)၊ဖါတွေမာ(အ.စ)၊ နှင့်၎င်းတို့နှစ်ဦး၏သားတော်နှစ်ပါးဖြစ်ကြသည့်အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)၊အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ဖြစ်ချေသည်။
ဟစန်(န)နဟ်ဆိုသည်မှာ အာလေ မိုဟမ္မဒ် (အ.စ) နှင့်အချစ် မေတ္တာ ထားခြင်း ကိုဆိုလိုပါသည်။
اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله تعالی (( ومن یقترف حسنة )) ، قال (( المودة لآل محمد )).
အေဗ်နေအဗီး ဟာသင်းမ် အနေဖြင့် မိမိ၏ သဖ်စီး (အကျယ် ဖွင့်ကျမ်း ) တွင် ဂျနာဗေအေဗ်နေအဘာစ် (ရ.သွေ ) ထံမှ တဆင့် ရေးသား သီးကုံးထားပေသည်။
အာယသ်တော် (၄၃း၂၃ ) ပါ ومن بفترف حسنة
အဓိပ္ပာယ် - (အကြင်မည်သူ မဆို (နေကီး)ကောင်းမူ ကုသိုလ် တစ်ခု လုပ်မည်ဆိုလျှင် အကျွန်ုပ် (အလ္လာဟ်) အနေဖြင့် ၎င်း၏ (နေကီး) ကောင်းမူကုသိုလ် အား အဆထိုးပေးသနားတော်မူ မည် ။ )
အာယာသ်တော်တွင်ပါသော စကားလုံး ဟစန်(န)နဟ် ဆိုသည် မှာ အာလေမိုဟမ္မဒ် (အ.စ) နှင့် အချစ်မေတ္တာ ထားခြင်းကို ဆိုလို ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။